နည်းပညာ မှတ်တမ်း: May 2008
လန့်မသွားနဲ့ဦး။ Shutdown လုပ်ရုံဘဲ။
ကွန်ပြူတာမှာ i.e browser မသုံးရအောင် လှည့်စားတဲ့နည်းပါ။
1.Desktop မှာ right click/new/shortcut ရွေးပါ။
2.shortcut windows မှာ shutdown -s -t 30 -c "Virus Detection. Computer is shutting down." ဟုရိုက်ပါ။ 30 နေရာမှာ မိမိ ကြာစေချင်တဲ့ အချိန်ပြောင်းနိုင်ပြီး ``.......``မှာ နှစ်သက်ရာ message ရေးနိုင်ပါတယ်။ Next ကိုနှိပ်ပါ။
3.Title windows မှာ Internet Explorer ကိုရိုက်ပါ။ Finish နှိပ်ပါ။
4.Desktop ပေါ်က Internet Explorer ကို icon ပြောင်းပါမယ်။
Right click/properties/shortcut/change icon ကို အဆင့်ဆင့်သွားပြီး i.e shortcut ကို ရွေးပေးပါ။
C:/Program Files/ Internet Explorer မှာရွေးရင်လည်းရပါတယ်။
5.ဒါဆို i.e icon ကိုနှိပ်ရင် virus warning ပေးပြီး စက္ကန့် ၃၀ အတွင်း shutdown ဖြစ်သွားပါမယ်။
cancel လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ windows key+R/shutdown -a ကိုသုံးပါ။
ဥာဏ်ကွန့်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ Shutdown icon ပေါ့ဗျာ။
/ 17:00 / Comments: (0)
Gtalk မှာ group နဲ့ chat လို့ရတဲ့နည်းလေးပါ။ MIRC မှာ chatrooms ထိုင်သလိုမျိုးပေါ့။
Chatroom တွေက အကြောင်းအရာတစ်ခု (သို့) ၀ါသနာတူသူတွေစုပြီး ဆွေးနွေးရတာ အကျိုးရှိလှပါတယ်။
Chatroom တစ်ခုဖန်တီးဖို့ လွယ်ကှူတဲ့အတွက် google user တွေ အောက်ပါ command တွေနဲ့ group chat လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
1.Gtalk မှာ login ၀င်ပါ။
2.partychat@gmail.com ကို invite လုပ်ပါ။ partychat2@gmail.com,partychat3@gmail.com တို့ကိုလည်း invite လုပ်လို့ရပါတယ်။ partychat မှချက်ချင်း online ဖြစ်လာပါတယ်။
3./make channel ဟု partychat အားရိုက်ပို့ပါ။ [channel] နေရာတွင် နှစ်သက်ရာပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ။ ။ နာဂစ်၊ဆိုင်ကလုန်း ( Nargis,Cyclone)
4.Chatroom တွင် အတူပါဝင်လိုသူများမှာလည်း partychat@gmail.com အား invite လုပ်ရပါသည်။
ပြီးလျှင် /join channel ဖြင့် ၀င်ရောက် နိုင်ပါပြီ။
5./commands ဖြင့် partychat မှာ အသုံးပြုတဲ့ command များကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
/ 13:59 / Comments: (0)